Momba anay - SuKo Polymer Machine Tech Co., Ltd.
ARAHABAINA NY TEKA MACHINE SUKO POLYMER
Any amin'ny faritra avaratry ny Changzhou, faritanin'i Jiangsu, ny orinasanay dia miavaka amin'ny haitao mandroso sy ny milina manan-tsaina.
Corporate Vision: Ho lasa marika fampiasa fluoroplastic voalohany manerantany ao anatin'ny telo taona.
Mission: Avelao ny orinasa fluoroplastic rehetra hampiasa fitaovana avo lenta sy faharanitan-tsaina hamoronana vokatra avo lenta.
Values: Fanavaozana, fisokafana, fahamendrehana ary fandresena.
Niorina tamin'ny 2006, manana traikefa an-tsokosoko maherin'ny 13 taona amin'ny milina sy fitaovana fitrandrahana PTFE / UHMWPE izahay ho an'ny fampiharana manokana amin'ny sehatry ny fanodinana plastika.
Manam-pahaizana amin'ny fitrandrahana PTFE / UHMWPE sy vokatra amina karazana sy maodely isan-karazany, Suko no lohalaharana amin'ny indostria Tetrafluorohydrazine miaraka amin'ny fanavaozana ny teknolojia, ny asany ary ny faharanitan-tsaina na eto an-toerana na any ivelany.
Ny hoavin'ny orinasa
Mba ho lasa marika fampiasa fluoroplastic voalohany eran'izao tontolo izao ao anatin'ny telo taona. Avelao ny orinasa fluoroplastic rehetra hampiasa fitaovana avo lenta sy manan-tsaina hamoronana vokatra avo lenta.
Miasà mafy Ho amin'ny ho avy tsara kokoa!
HITSIDIHO NY FITIAVANA
Departemantan'ny R&D anay
Alohan'ny hanaterana ny masinina na ny vokatra ptfe antsasaka amin'ny mpanjifantsika dia mila manao andiam-pitsapana maromaro isika hanatrarana ireo karazana lalàna rehetra.
Ny fotodrafitrasa ataontsika dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fahafahantsika mahafeno ny fepetra takiana sy fenitry ny indostria. Ny singa famokarana dia napetraka miaraka amin'ny haitao maoderina sy fotodrafitrasa farany farany hanatsarana ny vokatra sy ny kalitaon'ny vokatray.
Indraindray izahay dia manatsara ny tenantsika amin'ireo teknika farany ary manana ireo fitaovana ilaina rehetra hanomezana vokatra sy serivisy avo lenta ho an'ireo mpanjifantsika sarobidy.
Ny milina lehibeinay: PTFE Rod Extruder (mitsangana sy marindrano), PTFE Tube Extruder, milina famolavolana PTFE (Semi-mandeha ho azy & mandeha ho azy feno), Sinitter lafaoro, milina gasket PTFE, sns.
Vokatra lehibe: Tsorakazo PTFE, fantsona PTFE, ravina PTFE, fantsona mihosona PTFE, sarimihetsika PTFE, tombo-kase PTFE
Manondrana any Etazonia, UAE, Saudi Arabia, Korea, India, Russia, Philippines, Indonesia, Malaysia, sns. Miaraka amin'ny fanohanana teknolojia sy ny torolàlana momba ny fizotrany amin'ny mpanjifa.
Ny tsara indrindra aorian'ny serivisy aorian'ny komisiona toerana. Ny mpanjifanay dia nankasitraka ny fikatsahana ny hatsarana, amin'ny alàlan'ny fanomezana anay baiko miverimberina, izay miresaka betsaka momba ny fanoloran-tenanay amin'ny fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa.
Manolo-tena amin'ny indostria Tetrafluorohydrazine izahay nandritra ny folo taona lasa ary handroso amin'ny ho avy ary mandray anjara amin'ny fiarahamonina amin'ny alàlan'ny fitazonana fenitra etika avo lenta, manentana ny fikambanana amin'ny alàlan'ny fanajana ny mety ho an'ny tsirairay ary ny fampandrosoana ho orinasa mpamorona.